DEG-DEG: Cristiano Ronaldo Oo Abaalmarinta Ugu Muhiimsan Juventus Ku Guuleystay & Muran Xoogan Oo La Xidhiidha Dybala Oo Durtaba Dhashay - Gool24.Net
DEG-DEG: Cristiano Ronaldo Oo Abaalmarinta Ugu Muhiimsan Juventus Ku Guuleystay & Muran Xoogan Oo La Xidhiidha Dybala Oo Durtaba Dhashay
Kooxda Juventus ayaa abaalmarinta xiddiga sanadka ee kooxdeeda ugu dhawaaqday hoggaamiyaha weerarka kooxdeeda ee Cristiano Ronaldo kaas oo soo qaatay xilli ciyaareed qurux badan marka laga yimaado in kooxdiisu wixii laga filayay aysan wada gaadhin.
Ronaldo ayaa Juventus kusoo hoggaamiyay horyaalka Serie A markii sagaalaad oo xidhiidh ah balse xilli ciyaareedkan ayaysan qaab sidii kuwii hore u qurxoon koobkaas usoo hanan.
Juventus ayaa kulankii ugu dambeeyay Serie A ee ay ugu dabaaldegayeen horyaalka guuldarro 3-1 ah kala kulmay kooxda AS Roma iyadoo ay Inter Milan oo booska labaad ahayd Atlanta 2-0 kaga adkaatay taas oo ka dhigan in Juve horyaalka hal dhibic ku hanatay.
Xanuunka xilli ciyaareedkan ee Bianconeri ayaa gaadhay meeshii ugu xumayd habeenimadii Jimcihii kaddib markii ay tartanka UEFA Champions League kaga hadheen gacmaha kooxda Lyon walow uu Ronaldo laba gool dhaliyay.
Iyadoo uu CR7 ahaa wanaaga kaliya ee Juventus uga dhex muuqday kulankaas ay CL kaga hadheen sababta kooxdii booska 7-aad kaga dhammaysatay Ligue 1 ee Lyon ayaa haatan loogu dhawaaqay inuu yahay xiddiga sanadka ee kooxdooda.
Ronaldo ayaa booska saddexaad ka galay guud ahaan gool dhalinta qaarada Yurub kaddib 31 gool oo Serie A ah oo uu soo dhaliyay waxaana uu kaliya ka dambeeyay Ciro Immobile (36) iyo Robert Lewandowski (34).
Wareerka iyo muranka ka dhashay abaalmarintan uu Juventus dhexdeeda ugu guuleystay Ronaldo ayaa ah in abaalmarintii weyneyd ee xiddiga sanadka ee guud ahaan horyaalka Serie A la siiyay saaxiibkiisa kooxdaas ee Paulo Dybala.
Si lamid ah sida haatan loola yaaban yahay in Ronaldo uu abaalmarinta gudaha kooxdiisa ugu garaacay Dybala ayaa maalmo kahor loola yaabaanaa in Dybala uu Ronaldo oo xilli ciyaareed weyn qaatay kaga guuleystay xiddiga sanadka ee Serie A.